गाडीमा भोकै रहेका यात्रुलाई उद्वार गर | Ekhabar Nepal
गाडीमा भोकै रहेका यात्रुलाई उद्वार गर
समाज भाद्र १४ 2078 ekhabarnepal
एक हप्तादेखि आएको भीषण वर्षाका कारण वाढी पहिरोले आपत विपत पारेको छ । कैयौंका घर वगाएका छन् । घर घरमा वाढी पसेर विचल्ली भएको छ । यो भन्दा वढी समस्या चार पाँच दिनदेखि सडक भत्केका कारण सडकमै रात विताउनेहरुको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गैंडाकोटको थुम्सीमा यात्रुको बिचल्ली छ । गत बिहीबार बगेको डाइभर्सन नबनाउँदा गाडी वार पार गराउन सकिएको छैन । जसका कारण करिव २० किलोमिटर सडक जाम छ ।
खासगरी ठूला गाडीमा चढेका लामो रुटका यात्रुहरू सडकमै छन् । गैंडाकोटदेखि रजहर बजारसम्म गाडीको लाम छ । कतिपय ब्यक्तिहरु बालबच्चासहित सडकमै दिन रात विताएर वसेका छन् । यो अवस्थामा अस्थायी डाइभर्सन बनाएर पनि गाडीलाई पार लगाउनु पर्ने अवस्था छ । यदि यसो हुन सक्दैन भने साना गाडीको ब्यवस्था गरी त्यस्ता यात्रुको उद्वार गर्न किन ढिलाई भइरहेको छ ? वर्षा नभएको भए पैदलै हिडेर पनि यात्रुहरु गन्तब्यमा पुग्ने थिए होला, तर त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने चटारो मात्र छ । हरेक दिन पटक पटक वैठक वसेर सत्ता वाँडफाँडका वारेमा चर्चा हुन्छ तर अलपत्र यात्रुकोवारेमा सरकार, मानवअधिकारवादी संघ संगठन वा अरु कसैलाई एउटा विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने वा सहानुभूति दिने फुर्सद पनि छैन ।
नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको काम भइरहेकोले यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई उद्वार गर्नेतर्फ ध्यान लगाउनु जरुरी छ । यो वेलामा अरु केही नभएपनि अलपत्र यात्रुलाई वुटवलसम्म ल्याउन सक्दा उद्वार हुन सक्ने अवस्था छ । के सरकारले यति पनि गर्न सक्दैन ? गैडाकोटदेखि बुटवलसम्म साना गाडीवाट यात्रुहरु ल्याउने व्यवस्था गरेर पनि यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ ।